Fantatra fa miisa 52 ireo firenena efa niparitahan` ity aretina ity maneran` izao tontolo izao. Vao maika mifendraka amin`ny faritra maro ny COVID-19 hany ka voatery tsy maintsy manamafy ny ady atao ireo tompon’andraikitra. Ankoatra an`i Sina dia i Korea Atsimo sy Italia ary Frantsa no tena ahitàna trangan`aretina. Amin`izao fotoana dia maherin`ny 50 tapitrisa no voatery natoka-monina tanteraka ka manaraka fitsaboana manokana. Ho an`i korea atsimo izay betsaka ny tahan`ny olona voan ny aretina dia miampy 500 indray ireo olona voamarina ao aminy mitondra ny tsimokaretina. Ao Frantsa dia miisa 13 ireo tranga voamarina ary roa no fantatra efa matiny. Ny teo anivon`ny minisiteran`ny fahasalamam-bahoaka frantsay dia tsy maintsy nakatona ireo ivontoerana rehetra mahavory olona betsaka sy mampisarika mpizahatany maro, hoy ny minisitra Jerome Salomon, toy ny “musée du Louvre” izay mahasarika mpitsidika 9,6 tapitrisa isan-taona.